Indlu yoMlambo - I-Airbnb
Intle indlu yelizwe exhotyiswe ngokupheleleyo, ikufutshane kakhulu kwiindawo ezikhangayo zabakhenkethi ezifana ne-Arenal Volcano kunye nemithombo eshushu. Yonwabela ukuhlala ngokuhambelana nendalo, izandi zomlambo kunye namaphandle. imoto.Kwiimitha ezingama-200 kuphela uya kufumana indawo yokutyela enokhetho olubalaseleyo lwezitya kunye neminisuper.
Indawo inamagumbi okulala ama-3, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi, i-air conditioning, i-cable TV, i-intanethi. Igumbi lokuhlambela elinamanzi ashushu kunye nezinto eziluncedo. Ukongeza kwidesika ukonwabela iimvakwemini.
Ubumelwane bukhuselekile, kunye nokuzola (indawo yentsapho, abazali abanabantwana kunye nabasebenzi bavame ukuhamba imini nobusuku) Yintoni eyenza indawo ekhethekileyo bubuhlobo babo bonke abamelwane, bahlala bebonisa uncumo kwaye bahlala bebulisa kwaye baya kuthanda. nceda xa kukho into oyifunayo.Abamelwane uninzi lweentsapho ezinabantwana, kuba iLa Fortuna yenye yezona ndawo zikhenketha kakhulu eCosta Rica kwaye abamelwane basebenza kwiihotele, abakhenkethi, ezolimo, imfuyo njl.
Ndiza kufumaneka ngalo lonke ixesha iindwendwe zam zindidinga okanye xa behlala ukuze ndazi ulwazi oluthile endikuyo ukuze ndibancede kwinto endinokuyenza njengoko ndihlala kufutshane kwaye indenza ndifikeleleke ukubanceda .. :)